トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Fiiri iyada oo qaabeynta kooxda Horukon in qowladda pachinko ah
pachinko The eray qaabeynta kooxda, sida caadiga ah caadi ahaan laga yaabaa in erayada ku cusub Haddii aad tahay ee aad pachinko xiiso leh, uma baahnid inaad hesho caawimo laakiin waxa uu sheegay in qaabeynta group laftiisa ma aha run ahaantii. Tan waxaa laga yaabaa in dad badan oo aan la qabsado oo aad u badan si aad u maqasho, waxaan kooban doonaa description. Mashiinka Pachinko sidoo kale, uma shaqeeyo oo aanu siin korontada. Ujeedada this, laakiin korontada ee loo baahan yahay, sida caadiga ah guriga waa 100 volts.
Si kastaba ha ahaatee, sababtoo ah korontada ee makiinadda pachinko ah waa 24 volts, oo ay noqoto tamaraysan sida ay tahay, waxa ay noqon doontaa qiiq duuli doonaa fiyuuska. Si aan sidaas la sameeyo, waxaad u baahan doontaa transformer ah si loogu badalo danab ku.
xiran ee lala this mid transformer, waxaan jeclaan xaqiiqda ah in qaabeynta kooxda. qaabeynta kooxda The, waxaa jira saddex nooc oo waaweyn oo. Side-ilaa-dhinac u qaabeynta in tirada dhamaadka qaabeynta, isla waxaa qaabeynta aan joogto ahayn. Si loo garto qaabeynta kooxda, waxaa jira doorashada ma jiro, laakiin si ay u dhawraan.
kaliya, waxaan u malaynayaa karaa in ay tahay fikrad fiican si ay u dhawraan galay jasiiradda waxaa inta badan ku dhuftay.
group qaabeynta, sida laga jari karaa dhuftay in lala group la mid ah midba midka kale, u muuqdaan in ay in signal la socda ka conserver hoolka noqon sida. The Sida loo aqoonsado qaabeynta yaraa tirada, lambarka kiiska dhamaadka madal waa hit weyn ahaa tiro isku mid ah, sare u suurtagal ah in tiro qaabeynta ugu da'da yaraa.
taagan maqan yahay daqiiqo, inaad u sheegto, waxa ay u muuqataa adag tahay in la fahmo oo aan si buuxda u dhawraan gudaha qowladda pachinko ah. Markaas, waa dhinac-ilaa-dhinac u qaabeynta, waa sida ay fududahay in si fahmaan marka la barbar dhigo qaabeynta Warega dhamaadka hore. Haddii
sababta, maxaa yeelay, waxaa inta badan laga sameeyey afar dhinac-ilaa-dhinac ee shan kooxood oo ka mid ah, aad Ghanna u badan tahay in ay dhacaan dhinac. Laga yaabaa in aanay ku socdaan, aad arki doonaa haddii dhawrid ku barta. Haddii dhinac-ilaa-dhinac hit ee
ag joogaan, waxay kordhisaa suurtagalnimada of qaabeynta dhinac-ilaa-dhinac ah. In si kale loo dhigo, daawashada wanaagsan oo tiro miiska ay ku dhaceen Ghanna ah, tirada ugu yar The more hits miiska la mid ah, sare suuragalnimada in tirada qaabeynta yaraa, marka hit ah in
dhinac-ilaa-dhinac waxaa garaacid ku urursan yahay, u muuqataa sida xaqiiqda ah in ay jiraan waa wax macquul ah sare ee qaabeynta dhinac-ilaa-dhinac ah. Ugu dambeyntii, waa qaabeynta aan joogto ahayn, qaabeynta aan joogto ahayn waa waxaan qabaa oo aad u badan waa ay adag tahay in la sheego. jasiiradda
jiro kiis ah in ay ama ay leeyihiin meel u dhow, oo waxay leedahay marna in koox ka mid ah, waa dad badan ma dareemaan. In kiiska noocan oo kale ah, iyo isku day in aad u dhawrtaan hit jasiiradda waa mid isku urursan, waxaa laga yaabaa in ay fududahay in la fahmo.
aan dhinac-ilaa-dhinac kasta, marka aan u badan tahay in qaabeynta dhamaadka waa waxyaalaha caynkaas ah in ay jirto waa wax macquul ah sare ee qaabeynta aan joogto ahayn. Waxaan u maleynayaa in dadka ay leeyihiin ee aad ogtahay, oo ay ku jirto xaqiiqda ah in ay jiraan waxyaabo u qaabeynta kooxda, laakiin, dhab ahaantii, sida qaabeynta koox aan jirin.
qaabeynta Kooxdu waxay la og yahay, haddii Asobere fadhiya mawqifkii qaabeynta isku, laakiin waxa la sheegay in jaaniska ah qaadaan hit ah ee soo socota uu ka sareeyo, ee qaabeynta group qaaddeen waa dukaanka, waa farsamo ah in aan la isticmaali Karin.
First, iyo tii pachinko si taxadar leh lagu arkay, waa ammaan in arrimuhu sida a ayaa bilaabay baaritaan ka barta in ama aan la arkin. qaabeynta koox noocan oo kale ah aan la jirin.
First, iyo tii pachinko si taxadar leh lagu arkay, waa ammaan in arrimuhu sida a ayaa bilaabay baaritaan ka barta in ama aan la arkin.